China High Quality Ascorbic Acid Powder fekitari uye vagadziri | Tianjia
1. Kurudzira biosynthesis ye collagen. Izvo zvinoita kuti kukurumidza kupora kwemaviri maronda
2, kukurudzira metabolism ye tyrosine uye tryptophan muamino acids, kuwedzera hupenyu hwemuviri.
3. Kuvandudza kushandiswa kwesimbi, calcium uye folic acid.
4. Kuvandudza metabolism yemafuta uye lipids, kunyanya cholesterol, uye kudzivirira chirwere chemwoyo.
5. kusimudzira kukura kwemazino nemapfupa, kudzivirira chingamu kubuda ropa, kudzivirira marwadzo akabatana, musana uye kurwadziwa kwegumbo.
6.Kwidziridza iyo yekudzvinyirira kugona uye hutachiona hwemuviri kune yekunze nharaunda.
7. Mvura-inogadziriswa antioxidant, kunyanya mune aqueous solution mumuviri.
8. Simba rakabatana rinobatana.
9. Kurudzira synthesis ye collagen uye kudzivirira chingamu kubuda ropa.
Pashure: Zvakanakisisa kutengesa Chikafu Chekuwedzeredza Citric Acid Anhydrous
Zvadaro: Fekitori Kupa Yakakwira Yakakwira Cocoa Powder
Ascorbic Acid Powder Kune Ganda
Yakachena Ascorbic Acid Powder
Vitamin C Ascorbic Acid Upfu
Soy Protein Isolated, Ascorbic Acid Powder Bulk, Vitamin C Ascorbic Acid Upfu, Monk Chibereko Bvisa, Yakachena Ascorbic Acid Powder, Aspartame,